Mikatona ny Hawaii Disaster Recovery Center noho ny fandrahonana loza hafa ateraky ny Hurricane Lane
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Mikatona ny Hawaii Disaster Recovery Center noho ny fandrahonana loza hafa ateraky ny Hurricane Lane
Aogositra 21, 2018
Hakatona ny 23 aogositra ny ivon-toerana fanarenana ny voina any Hawaii, manampy amin'ny fipoahan'ny Kilauea, noho ny fandrahonana nataon'ny rivodoza Lane.
Hakatona ny alakamisy 23 aogositra ny ivon-toerana fanarenana ny loza voajanahary / fanjakana / faritany iraisana ao amin'ny Nosy Lehibe Hawaii izay manampy ireo mponina amin'ny fanarenana ny fipoahan'ny Kilauea ny alakamisy XNUMX aogositra noho ny fandrahonana nataon'ny Hurricane Lane.
Nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny masoivohon'ny Federal Emergency Management Agency fa ny Ivotoerana fanarenana ny voina ao amin'ny Pahoa Neighborhood Facility any Pahoa dia hakatona amin'ny harivan'ny alarobia izao ary hamerina handinika ny toe-javatra ny zoma maraina izy ireo raha toa ka azo antoka ny fisokafana.
Ireo mponin'ny nosy na orinasa izay tratry ny fahasimbana na fatiantoka vokatr'ilay fipoahana dia nanomboka ny alarobia 12 septambra mba hisoratra anarana ho fanampiana amin'ny FEMA na ny US Small Business Administration.
Ireo tafavoaka velona dia mety hisoratra anarana amin'ny Internet ao amin'ny DisasterAssistance.gov na amin'ny alàlan'ny telefaona 800-621-3362 na (TTY) 800-462-7585. Ireo mpangataka mampiasa 711 na serivisy Video Relay dia mety hiantso ny 800-621-3362. Ny isa tsy andoavam-bola dia misokatra 7:00 maraina ka hatramin'ny 10:00 hariva, fito andro isan-kerinandro.
Ny fanampiana amin'ny loza voajanahary dia mety ahitana famatsiam-bola ho an'ny trano fonenana vonjimaika, fanamboarana trano sy fanoloana trano, ary koa fampindramam-bola misy zanabola avy amin'ny US Small Business Administration. Ireo fampindramam-bola ireo dia natao ho an'ny orinasa, orinasa tsy miankina tsy miankina, tompon-trano ary mpanofa trano hialana amin'ny fatiantoka tsy voaloa amin'ny fiantohana na amin'ny fanarenana hafa.
Ireo mponina any amin'ireo faritra mety iharan'ny Hurricane Lane dia tokony hanaraka ny làlan'ny mpitondra fanjakana sy ny tompon'andraikitra eo an-toerana. Raha asaina mamindra toerana ianao dia ataovy izany na miomàna hialokaloka amin'ny toerany. Entanina ny mponina hanohy hanara-maso ny onjam-peo, ny fahitalavitra na ny kaonty media sosialy ofisialy raha te hahalala vaovao maika.
Ny 12 septambra ihany koa no fe-potoana farany fametrahana fangatahana fampindramam-bola ho an'ny fahasimbana ara-batana amin'ny SBA. Ireo mpangataka dia afaka mangataka amin'ny SBA -tserasera. Ireo mpangataka dia afaka miantso ny Ivotoerana Serivisy ho an'ny mpanjifa SBA (800) 659-2955 na mailaka ihany koa [email voaaro] raha mila fanazavana fanampiny momba ny fanampiana ny loza SBA. Ny olona marenina na tsy mandre dia afaka miantso (800) 877-8339.